Etazonia hampiato ny famoahana visa ho an'ny olom-pirenenan'i Kambodza, Eritrea, Guinea ary Sierra Leone
Home » Toerana fitsangatsanganana » Etazonia hampiato ny famoahana visa ho an'ny olom-pirenenan'i Kambodza, Eritrea, Guinea ary Sierra Leone
Septambra 13, 2017
Nilaza ny Departemantam-panjakana amerikana fa hitsahatra ny famoahana karazana visa sasany amin'ny olom-pirenenan'i Kambôdza, Eritrea, Guinea ary Sierra Leone, noho ny fandavan'izy ireo tsy hamerina ireo olom-pirenena sesitany azy ireo.
Ny politikam-panjakana vaovao dia napetraky ny sekreteram-panjakana Rex Tillerson tamin'ny talata teo. Ny mpitondra tenin'ny Departemantam-panjakana Heather Nauert dia nanamafy fa ny fameperana dia napetraka amin'ny firenena efatra nanomboka ny alarobia teo, hoy ny AP.
Ny fameperana dia niresaka voalohany tamin'ny tompon'andraikitra amerikana tamin'ny volana lasa teo, taorian'ny nanoloran'ny Departemantan'ny Security Homeland ny Departemantam-panjakana handray andraikitra amin'ireo firenena efatra noho ny fandavany hiara-miasa amin'ny politika fifindra-monina an'ny governemanta Trump.
Tamin'ny fanambarana nataony momba ny sazy visa, nilaza ny DHS fa tsy azo atokisana ireo firenena efatra amin'ny famoahana taratasim-pizahan-tany ho an'ny olom-pireneny. Noho io antony io, “noterena hamoaka tany Etazonia ny mpiady gineanina tokony ho 2,137 831 ary teratany XNUMX Sierra Leone ny ICE, maro ireo no meloka ho meloka.”
Nilaza ny DHS fa manodidina ny 700 ny teratany Eritrea monina any Etazonia miaraka amin'ny baiko fanonganana farany. Teratany Kambodjiana mihoatra ny 1,900 ihany koa no iharan'ny famaranana farany, ary voaheloka ho meloka ireo 1,412 ireo.
Ho an'ny Kambodziana, ny fameperana ny asa aman-draharaha sy ny fizahantany dia tsy misy afa-tsy ny tompon'andraikitra amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny no manana ny toeran'ny tale jeneraly sy ny ambony, miaraka amin'ny fianakaviany.
Ny Masoivoho amerikana any Eritrea dia hampitsahatra ny famoahana visa momba ny fizahan-tany sy visa fizahan-tany ho an'ireo teratany Eritreana, miaraka amin'ny «fanilikilihana voafetra», hoy ny fanambarana nataony.
Ny firenena afrikanina tandrefana gineana dia nilaza fa ny fameperana vaovao amin'ny raharaham-barotra, fizahan-tany ary visa ho an'ny mpianatra dia tsy misy afa-tsy ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta sy ny mpianakavin'ny fianakaviana akaiky no hisy fiantraikany eo.
"Gaga isika rehetra tamin'ny fanapahan-kevitry ny manampahefana amerikana tamin'ny fanapahan-kevitry ny manampahefana amerikana fa ny minisitry ny raharaham-bahiny kosa miasa amin'izao fotoana izao mba hiverina amin'ny laoniny ny toe-draharaha", hoy ny mpitondra tenin'ny governemanta gineana, Damantang Albert Camara, tamin'ny Reuters.
Any Sierra Leone, hisy fiantraikany amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny sy ny mpiasan'ny fifindra-monina ny famerana ny visa momba ny fizahan-tany sy fizahantany.
Ny Visa efa nomena dia tsy voakasiky ny lalàna vaovao.
Misy firenena am-polony hafa, anisan'izany i Shina, Cuba, Vietnam, Laos, Iran, Burma, Morocco ary South Sudan, voatanisa ho mpangataka noho ny fanekena ireo noroahina. Ny lalàna federaly dia mamela ny Departemantam-panjakana hampiato ny karazana visa rehetra na manokana tsy hanomezana firenena toy izany.
Ny ohatra farany indrindra dia tamin'ny Oktobra 2016, rehefa nijanona ny famoahana visa tamin'ny mpitondra fanjakana Gambiana sy ny fianakavian'izy ireo ny fitondran'i Obama, satria tsy naka ny sesitany amerikana avy any Gambia ny governemanta.
Resadresaka: talen'ny birao fizahan-tany fizahan-tany any Chengdu
IOC dia manome ny Lalao Olaimpika 2024 ho an'i Paris, ny Lalao Olaimpika 2028 ho an'i Los Angeles